कृषकलाई पुरस्कृत गरिने
दमौली ,३० साउन ।
भेनेटरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले उन्नत जातका भैंसी तथा गाईमा आत्मनिर्भर बन्न पाडा÷पाडी तथा बाच्छा÷बाच्छी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष देखि संरक्षण गर्ने कृषकलाई केन्द्रले रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा भैंसी तथा उन्नत गाई भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईएको केन्द्रले जनाएको छ । आत्मनिर्भर मात्रै नभई निर्यात गर्न समेत मद्धत पुग्ने दीर्घकालिन लक्ष्य केन्द्रको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा भैंसीको पाडा÷पाडी र गाईको बाच्छाबाच्छीलाई हुर्काउने अभियान शुरु गरिसकेको छ । अभियान सफल बनाउन केन्द्रले कृषकलाई पुरस्कार स्वरुप प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरेको छ ।
उन्नत जातका भैंसीमा मुर्रा, गाईमा होलस्टेन, जर्सी हुर्काउने जुनसुकै कृषकले अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाईएको हो । जन्मिएको दर्ता गरी हुर्किएको देखाए पछि अनुदान पाउने केन्द्रले जनाएको छ । कृषकलाई एउटा हुर्काउँदा १० हजार रुपियाँ पाउने गरी ४०० वटालाई अनुदान दिनको लागि रकम विनियोजन गरिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञकेन्द्र तनहुँका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले सेतीमादीलाई बताए । डा. श्रेष्ठका अनुसार यही साउन महिना देखि जन्मिएका बाच्छा÷बाच्छी तथा पाडा÷पाडी हुर्काउने अनुदान पाउने छन् ।
‘नेपालमा अभाव हुने गरेकोले मुर्रा भैंसी र जर्सी गाई भारतबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ, केन्द्रका प्रमुख डा.श्रेष्ठले भने अनुदान पाएपछि कृषकहरुले हुर्काउँछन् यसले दीर्घकालिन रुपमा पर निर्भता हटाउन मद्धत पुग्छ ।’ कृषकलाई पाठा÷ पाडी तथा बाच्छा बाच्छी हुर्काउन भन्दा दुध बेच्न फाइदा हुने गरेको दुध खान नदिएर अधिकांश कृषकले मार्ने गरेकोले नेपालमा राँगा÷भैंसी र जर्सी गाईको अभाव हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । प्रोत्साहन रकम पाउँदा कृषकलाई हुर्काउँदा फाईदा हुने भएको आत्मनिर्भर बन्ने अपेक्षा गरिएको डा. श्रेष्ठको भनाई छ ।
Seimadidaily (सेतीमादी) August 14, 2020
Previous Previous post: बुद्ध सिं मार्ग सुचारु नहुँदा समस्या
Next Next post: देवघाट गाउँपालिका सिल